Ka heshiinta shuruudaha heshiiska shaqada - InfoFinland
Nolosha Finland > Shaqo iyo ganacsi > Xuquuqda iyo waajibaadka shaqaalaha > Ka heshiinta shuruudaha heshiiska shaqada
Wadankan Finland xuuquuqda qofka shaalaha ahi waxuu ku qeexan yahay sharciga shaqada iyo heshiiska shuruuda shaqada (työehtosopimus). Kuwaasna waxaa lagu qeexaa tusaale ahaan mushaarka ugu hooseeya, waqtiyada shaqada, fasaxyada, mushaarka xiliyada jirada iyo shuruudaha dhamaadka shaqada.
Arrimahaan waxaa ka wada hadla oo isla meel dhiga ururada shaqo-bixiyeyaasha iyo ururada shaqaalaha ayago si wada jir ah uga heshiinaya shuruudaha shaqada ee dhinacyada kala duwan ee shaqada. Kani wuxuu markaa keena heshiisyo loo wada dhan yahay. Qaybaha dowlada (markii uu shaqa-bixiyaha yahay xukumada ama dowlada hooseshaqa-bixiye) waxaa la waafajiyaa shuruudaha heshiiska booska/jagada (VES) ama shuruudda heshiska shaqada iyo jagada ee heer degmo.
Waxyaabaha lagu heshiiyo marka la samaynayo heshiiska shuruudaha shaqadu waa xuquuqaha ugu hooseeya oo aan laga hoos mari karin (vähimmäisetu). Lagama hoos mari karo marka heshiiska shaqada la samaynayo. Tusaale ahaan mushaarku kama hoosayn karo midka lagu shiiyey markii la sameynayey heshiiska shuruudaha shaqada. Laakiin shaqo-bixiyaha iyo qofka shaqaalaha ahi way ku heshiin karaan mushaar ka fiican kan ku qoran heshiiska shuruudaha shaqada.
Marka la samaynayo heshiiska shuruudaha shaqada waxaa lagu heshiiyaa waqti cayiman, sida badan sannad ama labo sano ama waqti ka dheer. Heshiiska shuruudaha shaqada iyo jagaduba waxay labada urur shaqaale ee shaqa-bixiyaha iyo shaqaalaha iyo xubnahoodaba ku xakamaynaysaa inay u hogaan samaan heshiiska. Heshiiska shuruudaha shaqadu wuxuu noqon karaa mid xakameeya dhammaan. Markaas shaqo-bixiyeyaasha aan ku jirin urur shaqaale waxaa ku waajiba inay ilaaliyaan iyo shaqaalahoodana waafajiyaan heshiiska shuruudaha shaqada ee khuseeya hadba waxa ay ka shaqeeyaan.
Codsiga shaqada iyo heshiiska shaqada waxaa ku qornaan kara ”palkkaus TES:in mukainen” (mushaar ku waafaqsan heshiiska shuruudaha shaqada). Waxaa wanaagsan inaad ogaatid inta uu la eg yahay mushaarka qaybta xirfadaada. Waxaa muhiim ah inaad taqaanid heshiiska shuruudaha shaqada, sababtoo ah tusaale ahaan Finland ma leh sharci sheegaya mushaarka ugu hooseeya inta uu noqon karo, balse a oo lagu sheegaa mushaarka ugu hooseeya waxay ku qeexan yihiin heshiiska shuruudaha shaqada.
Sahrci dejinta shaqadaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Shaqo-bixiyuhu wuxuu heshiis cusub la samaynayaa shaqaalaha cusub sida badan heshiiska shaqadu waa qoraal. Heshiiska shaqada waxaa ku qoran shaqada la qabanayo, mushaarka iyo waxyaabaha kale ee shaqada la xiriira ee faa’iida u leh shaqaalaha sida kaarka gaadiidka lagu raaco. Heshiiska shaqadu wuxuu ahaan karaa mid oorah ah. Haddii aan la samayn heshiis qoraal ah, shaqo-bixiyuhu waa inuu siiyaa qofka shaqaalaha ah si codsi la'aan ah shuruudaha shaqo qabashada u ah oo qoraal ah.
Waxaa mar walba wanaagsan heshiiska qoraalka ah. Haddii heshiisku qoraal yahay, shaqa-bixiyaha iyo qofka shaqaalaha ah labaduba waxay iska hubin karaan heshiiska iyo waxay wada jirka ugu heshiiyeen. Tani waxay dhinacyada ka caawinaysaa haddii muran yimaado.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan samaynta heshiiska shaqada ka akhriso bogga InfoFinlandi ee Waxyaabaha uu ka kooban yahay heshiiska shaqada.
Heshiis qoraal ah oo ku saabsan shuruudaha bartame u ah qabashada shaqada
Shaqo-bixiyuhu waa inuu siiyaa qofka shaqaalaha ah si codsi la'aan ah shuruudaha bartame u ah qabashada shaqada oo qoraal ah, haddii shaqadu ay tahay abadiyan ama shaqo aan dhamaadkeedu waqti ku xadidnayn iyo shaqooyinka bil ka badan soconaya.
Sharaxaada uu bixinayo shaqo-bixiyuhu waa in ugu yaraan ku qornaadaa:
shaqa-bixiyaha iyo shaqaalaha meesha ay dagan yihiin ama goobta ganacsiga
inta ay soconayso shaqada waqtiga ku xadidan iyo sababta loo xadiday
shuruuda heshiiska shaqo oo la ilaalinayo
Mushaarka qaabka lagu siinayo iyo waqtiga mushaarka la bixinayo
Waqtiga shaqada oo joogto ah
waqtiga shaqo ka eryida iyo kan ka tegida ama qaabka ay ku imaan karto shaqo ka eryidu ama ka tegidu
Haddii shaqo-bixiyuhu uunan siin shaqaalihiisa wax sharaxaad ah oo ku saabsan shuruudaha bartame u ah qabashada shaqada, waxaa lagu xukumi karaa inuu bixiyo ganaax.
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 04.11.2020 Boggan war-celin ka soo dir